Thwebula VIPRE 11.0.5.203 – Vessoft
Izigaba: Ukuvikelwa okuphelele, Antivirus
Ikhasi elisemthethweni: VIPRE
I-Vipre – iphakethe le-antivirus nazo zonke izindlela ezidingekayo zokuvikela emaphethweni asanda kuvela. Isofthiwe ivikela ama-virus, ama-trojans, i-ransomware, ama-rootkits, ama-spyware, ama-exploits, njll. I-Vipre ivikela ikhompyutha yakho ngokusekelwa ubuchwepheshe obusefu futhi iqhuba ukuhlaziywa kokuziphatha kwamafayela ngesikhathi sesikhathi sangempela ukuthola izinsongo ezintsha. Isofthiwe iqukethe i-antivirus ye-mail yokuvimbela okunamathiselwe okunonya kuma-imeyili futhi ivikele ngokumelene nobugebengu obubi. Futhi i-Vipre inezilungiselelo ze-firewall eziguquguqukayo ukuvikela i-intanethi ye-intanethi engenayo nephumayo.
I-high-quality ye-antivirus injini
Ukuvikelwa ngokumelene ne-ransomware
Amazwana ku VIPRE
VIPRE software ehlobene
Lena i-antivirus ebanzi enezinga eliphakeme lokuvikelwa ngokumelene ransomware, amagciwane, i-spyware, i-malware nezinye izinsongo ezisemhlabeni.
I-K7 – i-antivirus yokuvikela ngokumelene namagciwane ezinhlobo ezahlukahlukene, vimba izinsongo eziku-inthanethi futhi ubone nezinkinga zokuphepha ohlelweni.
I-ESET Smart Security Premium – i-antivirus yokuvikelwa kwe-PC enkulu maqondana nezinsongo zenethiwekhi nezasendaweni. Kunomphathi wephasiwedi owakhelwe ngaphakathi nesitoreji sefayela esifihliwe.
Lena umphathi wephasiwedi ukulawula idatha yomuntu siqu namaphasiwedi. Isofthiwe yenza kube lula ukudala amaphasiwedi aqinile futhi ugcwalise amafomu ewebhu.
Ithuluzi ukubhekana spyware. Isofthiwe kwenza ukwenza ukuhlaziywa eningiliziwe ohlelweni bese ukulawula esebenzisa ukuqala ebhuthini.
I-eScan Internet Security Suite – isoftware isekela ukusebenza ngempumelelo kwe-antivirus scan, ubuchwepheshe befu nama-algorithms we-comlpex wokutholwa kosongo lwe-heuristic.
Ukwakha 2 – isihleli sokusebenza okuningi ukwenza imidlalo ye-2D yezinhlobo ezahlukahlukene nobunzima. Isoftware ihlinzeka inqubo yokuthuthukisa eyenziwe lula yabasebenzisi ngaphandle kwamakhono wokuhlela.
Iklayenti ukusebenza thwebula amafayela kusukela internet. Isofthiwe ine a isethi elikhulu izici futhi likuvumela ukuba ucinge amafayela.